Soonka | Manhaj online
Audio Cadeynta Bidcanimada Xuska Dhalashad Nabiga Iyo Khaladaadka Ku Jira Audio Sidee Baynu Xaqa Ku Garan Karnaa Audio Xaqa Ka Garo Baadilka Kuna Camal Fal اعرف الحق من الباطل واعمل به Audio Sharaxa Al-Arbaciin An-Nawawiyyah – Darsiga 2aad Audio Sharaxa Kitaabka Usuul Al-iimaan Ee Al-imaam Muxammad Bin Cabdulwahaab – Darsiga 3aad Audio Sharaxa Kitaabka Usuul Al-iimaan Ee Al-imaam Muxammad Bin Cabdulwahaab – Darsiga 2aad Audio Sharaxa Kitaabka Usuul Al-iimaan Ee Al-imaam Muxammad Bin Cabdulwahaab – Darsiga 1aad Audio Sharaxa Kitaabka Aclaam Assunnah Almanshuura ee Xaafid Al-Xakami – Darsiga 40aad Audio Sharaxa Kitaabka Aclaam Assunnah Almanshuura ee Xaafid Al-Xakami – Darsiga 39aad Audio Su’aalo Iyo Jawaabo Ku saabsan Caqiidada iyo Tawxiidka الفتاوى في التوحيد والعقيدة Audio Xaqiiqada Tawxiidka Iyo Radinta Cidda Diiday Qaybinta Tawxiidka حقيقة التوحيد والرد على من أنكر تقسيمه Audio Raadka Tawxiidka Uu Ku Leeyahay Qofka Iyo Bulshada أثر التوحيد على الفرد والمجتمع Audio Caqiidada Ahlu Sunaha Ee Magacyada Alle Iyo sifooyinkiisa عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات Audio Sharaxa Al-Arbaciin An-Nawawiyyah – Darsiga 1aad Audio Sharaxa Al-Arbaciin An-Nawawiyyah – Hordhaca Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 80aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 79aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 78aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 77aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 76aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 75aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 74aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 73aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 72aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 71aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 70aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 69aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 68aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 67aad Audio Sharaxa Kitaabka Riyaadu Saalixiin – Darsiga 66aad
Su’aasha 37aad: Maalin Carafo ama Caashuuraa Haddii ay ku Beeganto Maalin Sabti Ma La Soomayaa?
Suaasha 36aad: Gabadh lagu leeyahay bishii ramadaan soonkeedii wax ka mida shawaalkii ma soomi kartaa
Sheekh Cabdikariim Xasan Xoosh
Suaasha 35aad: Hadii lagu seexdo iyadoon ramadaan ahayn oo saqdii dhexe la ogaado in ay ramadaan tahay maxaa layelayaa?
Suaasha 34aad: Qof weyn oo fidyo bixinayaa isagu qofkuu siiyay qofkale ma sii siin karaa hadii isagana ay tahay in uu fidyo bixiyo?
Suaasha 33aad: Soon waajiba hadii ruuxa lagu leeyahay mid sunne ah ma soomi karaa?
Suaasha 32aad: Waalidka markuu ruuxu ka soomaayo ma marka u dhinto ayuun buu ka soomayaa mise isaga oo noolna waa ka soomi karaa haduuna waalidku soomi karayn?
Suaasha 31aad: Muxuu samaynayaa ruux ramadaantii hore wax ka tageen oo cudurdaar uga tagay dabadeedna ramadaantii kale u soo gashay?
Suaasha 30aad: Qof weyn oo aan soomi karayn muxuu samaynayaa?
Suaasha 29aad: Niyada soonka la niyaysanayo ma waxa igu filan habeenka u horaysa ee ramadaan in aan niyeeysto mise habeen walba in aan niyeysto ayaa laasima?
Suaasha 27aad: Madaalicda kala duwan dadku miyay isku soomayaan mise iskuma soomayaan?
Suaasha 26aad: Hadii wakhti khalad ah la adimo oo dabadeedna adimaadaa dadkii ay maqlaan oo ay ku afuraan maxay hadhoow dadkii yeelayaan markay ogaadaan in ay cadceedii soo jeedo wakhtigay wax cunayeen?
Suaasha 25aad: Qofka soomani haduu istoobo soonkii ma ka jabayaa?
Suaasha 24aad: Qofkii gaboobey ee maskaxdiisii isku daadatay wakhtiyada qaarna ay xasuustii u soo noqonayso in badana ay ka maqnaanayso muxuu xaalkiisu noqonayaa?
Suaasha 23aad: Gabadha uurka leh iyo gabadha nuujinaysaa hadii ay ilmahooda u baqaan maxaa lagu yeelanayaa?
Suaasha 22aad: Laba suaalood oo la xidhiidha salaada taraawiixda
Suaasha 21aad: Qunuuda taraawiixdu daliil miyay leedahay?
Suaasha 20aad: Qofbaa wuu soomaa qaadkana wuu iibiyaa waxa uga soo baxana waa uu ku soomaa waanu ku afuraa waliba fidyana waa uu ka bixiyaa?
Suaasha 19aad: Ruuxii suxuurta ka tagay oo badheedh uga tagay dabadeedna dhibaato badani ka soo gaadhay suxuurtaa uu ka tagay ma ku danbaabayaa?
Suaasha 18aad: Nin xoolo xaaraana haysta ma laga shaqaysan karaa deetana taa ma lagu soomi karaa?
Suaasha 17aad: Dadka gawaadhida kaxeeya gawaadhidaasoo u kala gooshaaya wadanka oo marna xagan jooga marna xaga jooga ma yeelanayaa?
Suaasha 16aad: Ruuxa weyn ee da’da ah ee aan soomi karaynin ee ay ahayd in uu fidyo bixiyo hadii uu yidhaa wadaad masaajid tujiya yaan siinayaa ma ku baxaysaa?
Suaasha 15aad: Xadiiska ku saabsan “Qofkii Bisha Ramadaan Habeenkii Salaada u istaaga isagoo rumaysan Ajarna Raadsanaaya”…. danbi dhaafkaasi miyuu u xasilayaa qofkii wax ka mid ah Ramadaan habeenkeeda salaad u istaagay?
Suaasha 14aad: Ruuxii xanuun sanaaya oo jin ama sixir hayaa arinkaasina uu dhibayaa ma soomayaa mise waa afurayaa?
Suaasha 12aad: Hadii uu ruux arko ruux is ilaaway oo wax cunaaya ama cabaaya ma la xasuusinayaa soonkii oo kadaa ma la odhanayaa mise waa loo daynayaa?
Suaasha 11aad: Dadka meelaha dhibaatada badan ee aadka u kulul sida xeebaha oo kale ku soomayaa xaga fadliga miyay ka fadli badan yihiin kuwa kale?
Suaasha 10aad: Dadka qaarkood oo cibaadada googooya xukunkoodu muxuu yahay?
Suaasha 9aad: Ruux soomaaya soonkii ramadaan laakiin aan salaadii tukanaynin isaga xaalkiisa kawaran?
Suaasha 8aad: Hadii qofku isagoo sooman uu qof kale dhiig ka keeno soonkiisii ma ka burayaa mise kama buraayo tusaale ahaan macalinku hadii isagoo sooman uu ardayga dhiig ka keeno?
Suaasha 6aad: Hadii ruux soon qale ah lagu lahaa sanadana ka soo wareegeen ma waxa lagu yeelanayaa qalahii kaliyaha mise qalaha fidyo ayuu raacinayaa?
Suaasha 5aad: Waxan qaataa daawo indha lagu dhibciyo maalintiina sadex goor ayaa qaataa arinta noocaasi ahi soonkaygii wax ma yeelaysaa?
Suaasha 3aad: Xukunka Haweenayda Uurka Leh ee Soonku Dhib ku Yahay?
Suaasha 2aad: Waxaan leeyahay xanuunka gaasteriga mana soomi karo oo intii aan dhakhtar u tegi kareyey waan u tegey xaalna u maan helin waxaan bixiya fidyo 100 dollar oo aan abtigey u diro ma iga ansaxeysaa?
Suaasha 1aad: Haddi ay gabadhu ogaato maghrib ka bacdi in dhiigii xaydku ka yimid ma waxa saaran maalinta in ay soomka soo celiso mise soomkeedu waa sax?